Daawo :Sawirka gabar Shan Sano jir Ah oo Naaso Waaweyn u soo baxeen(Qiso cusub) | Xaqiiqonews
Daawo :Sawirka gabar Shan Sano jir Ah oo Naaso Waaweyn u soo baxeen(Qiso cusub)
Dover waa gabar dhalatay iyada oo caafimaad qabto balse todobaadyo ka dib dhalashadeeda jirkeeda waxa uu bilaabay in uu sameeyo koritaan saa,id ah waxeyna la dhibanaan jirtay Hurdo badan.
Dover ayaa jirkeeda waxaa uu bilaabay koritaan saa,id ah markii ay gaartay afar bilood, waxaadna u maleyneysaaa qof da, ah , markii ay gaartay da,da labo sano naasaheeda waxa ay bilaabeen koritaan xad ka bax ah waxaana batay jaceylka ay u heyso ragga.
Sanado dheer oo lagu sameeyey baaritaano aan wax natiijo ah laga helin ka dib ayaa waxaa Dover laga helay cudurka loo yaqaan “Adison’s disease” oo ah waqti Dover ay jirtay da,da 4 sano.
Adison waa cudur naadir ah oo ku dhaca qanjidhada adrenal, kaas oo baab,biya qanjirada Cortisol iyo aldosterone,
inkastoo cudurkani uu yahay mid ku badan dadka ka weyn da,da 30 sano balse waxaa marar dhif ah lagu arkaa caruurta isagoo sababo qaangaarnimo waqtigeeda ka soo hormurato.
Dover sidoo kale waxaa heysto cilladda welwelka iyo autism oo ah laba calaamadood oo caan uu ku yahay cudurka Addison.
Dover hooyadeed oo ah hooyo heysato labo caruur ah oo kale ayaa sameysay Page loogu magac daray “GoFundMe” si tabarucaad loogu aruuriyo Dovwer si loo sameeyo qaliimo hormone badal ah kuwaasi oo ku kacaya lacago qaali ah.